Maxay shaqaale weyni u baxaan? Maxay shirkadaha waawayn wali u qorayaan? | Martech Zone
Jimco, Nofeembar 17, 2006 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Douglas Karr
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan ku faraxsanaa inaan ka shaqeynayay dhowr shirkadood. Shirkadda aan inta badan ku cabiro waa Landmark Communications. Shaqaalaha Shirkadaha ee Landmark waxay awood u siisay shaqaalaha inay naftooda horumariyaan sida ugu yar ama yar intay doonaan. Shirkaddu waxay sameysay iyada oo aan ka baqayn maalgashiga ay ku samayn doonaan shaqaalaha laga yaabo inay lumiyaan. Madaxda shirkadu waxay u maleeyeen inay qatar badan tahay MAYA inay horumariyaan shaqaalahooda marka loo eego inay horumariyaan oo ay fasaxaan.
Natiijooyinka ka soo baxay Waaxda Soo-saarku waxay ahaayeen kuwo la yaab leh 7-dii sano ee aan ka shaqeynayay halkaas. Intii ay qaar ka mid ah shirkaddu dhibtoonayeen, waaxdeennu waxay jartay kharashyadii, mushaharkii oo kordhay, waxsoosaarkii oo fiicnaaday, qashinkiina sannad kasta oo aan ka shaqeynayay waan yareeyay. Waxaan u shaqeeyey shirkad kale oo weyn oo warbaahineed oo aan rumeysan ama abaalmarin horumarka xirfadeed. Shirkaddu hadda way burbursan tahay, shaqaaluhuna bidix iyo midig ayey uga tegayaan. Waxaan sidoo kale la shaqeeyay qaar ka mid ah shirkadaha da'da yar ee leh koritaanka weyn iyo kartida.
U fiirsasho aan sameeyay sanadihii la soo dhaafay ayaa ah caqabadda aadka u adag ee ah in shaqaalaha waaweyn la sii wado lana keeno tayo cusub markii loo baahdo. Nusqaamuhu waxay ku sii kordhayaan waqti ka dib xirfadaha shaqaalaha waaweyn, xirfadaha shirkaddu u baahan tahay, iyo xirfadaha celceliska shaqaalaha.
Jaantuska hoose waa qaabkeyga tan. Shaqaalaha waaweyni waxay badanaa ku horumaraan xawaaraha shirkadda ka dibna waxay bilaabaan inay ka dheereeyaan shirkadda. Tani waxay keenaysaa farqiga (A) baahida shaqaalaha iyo waxa shirkaddu bixin karto. Badanaa, tani waxay shaqaale u horseedaa go'aan, "Miyaan sii joogayaa mise waa inaan tagaa?". Waxay shirkadda uga tagaysaa farqi ay buuxiso, iyo khasaare weyn. Xusuusnow, kuwani waa xiddigaha waaweyn ee shirkadda.
Laakiin waxaa jira farqi kale (B) sidoo kale, baahida shirkadda iyo waxa celceliska shaqaaluhu bixin karo. Shirkadaha leh koritaanka guuleysta waxay inta badan la jaanqaadaan xirfadaha shaqaalahooda. Shaqaalihii aasaasiga u ahaa aasaasida shirkad weyn badiyaa maahan shaqaalihii loo baahnaa inay sii wadaan kobacaas ama u kala duwanaan karaan. Natiijo ahaan, waxaa jira farqi u dhexeeya tayada. Marka lagu daro bixitaanka shaqaalaha waaweyn, tani waxay sababi kartaa hoos u dhac weyn xagga tayada.
Tani waa sababta ay shirkaduhu u qaadanayaan qatarta ah inay sii wadaan horumarinta shaqaalaha u furnaan doona, iyo sidoo kale inay qortaan shaqaale fiican. Waa inay buuxiyaan meelaha banaan. Celcelis ahaan shaqaalaha ma sameyn karaan tan. Shirkaddu waa inay ka raadsataa meel kale hibo dhammaan heerarka. Tanina, waxay keentaa ciil. Celcelis ahaan shaqaalaha ayaa ka xanaaqsan qoritaanka shaqaale fiican.
Kaliya waa aragti, laakiin waxaan aaminsanahay in inta ay dadku wada shaqeynayaan, celceliska maareeyaha uu u janjeero inuu xoogga saaro daciifnimada shaqaalahooda marka loo eego xooggooda. Xitaa qofka weyn ee shaqaalaha ahi isaga / ayada wuxuu ku arkaa microscope-ka xirfadaha, loo sheego, inuu u baahan yahay horumar. Khaladka ugu xun ee ay shirkaddu samaysaa waa inay qorto hibo marka ay, iyagoo aan ogayn ay hibo weyn u leeyihiin sanka hoostiisa. Diirad saarida shaqaalaha waaweyn daciifnimadooda waxay hubaal ka caawin doontaa go'aanka shaqsiyeed ee ay tahay inay ku ekaadaan ama joogaan.
Marka, masuuliyadda hoggaamiyaha weyn si aan caadi ahayn ayaa u adag, laakiin la maareyn karo. Waa inaad xoogga saartaa awooda shaqaalaha, ee aadan daciifnimada ahayn, si aad si dhab ah u cabirto awooda shaqaale. Waa inaad hubisaa inaad abaalmarin iyo dhiirrigeliso shaqaale weyn. Waa inaad hubisaa inaad ku qoroto hibo weyn ururka si aad u buuxiso meelaha banaan. Waa inaad qaadataa halista aad ku horumarinayso shaqaale weyn - inkasta oo aad waayi karto. Beddelka ayaa ah inaad hubiso inay tagayaan.
Waa urur aan caadi ahayn iyo hoggaamiye aan caadi ahayn oo si taxaddar leh u dheellitiri kara god-daloolooyinkaas oo u maareeya si wax ku ool ah. Weligay maan arag iyadoo si dhammaystiran loo qabtay, laakiin waxaan arkay iyadoo si fiican loo qabtay. Waxaan ku kalsoonahay inay tahay astaamo ururo waaweyn oo leh hoggaamiyeyaal waaweyn.
Billy Abwaan Blogging
Nov 18, 2006 at 7: 31 AM
Waxaan rumeysanahay inaad sameysay indha indheyn heer sare ah waxaanan ku dari doonaa shirkado badan shaqalaha ugu waaweyn inta badan waa laga faa'iideystaa halka shaqaalaha yar yar loo ogol yahay kaliya inay ku ordaan taasoo u horseedaysa gubasho iyo qanacsanaan la'aan wixii ay mar aaminsanaayeen inay shaqo weyn noqoto.
Jan 12, 2007 saacadu markay ahayd 5:39 PM
Maqaal weyn! Doevetails wuxuu si fiican ula socdaa xikmada ka timi "First Break All The Rules". Wanaagsanaa - mahadsanid!
Jebinta Koowaad Dhamaan Xeerarka ayaa runtii ah buugga aan ugu jeclahay hoggaaminta!